» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग ९
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग ९
२७ चैत्र २०७६, बिहीबार १३:००
मकवानपुर, २७ चैत । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ अहिले चर्चामा छ । नेपालकै ठूलो भनेर दाबी गरिएको सिंगिङ रियालिटी शोको पोखरा र बुटवल अडिसनबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका प्रतियोगीहरुका बारेमा हामीले यसअघि नै भिडियोहरु बनाईसकेका छौँ । यदि तपाईले हेर्नुभएको छैन भने यस भिडियाको जानकारीखण्डमा मैले लिंक राखेको छु । साथै भिडियोको अन्तिममा पनि तपाई हेर्नसक्नुहुनेछ । यस भिडियो सिरिजको नवौँ भागमा भने चितवन अडिसनबाट छानिएका ३ जना प्रतियोगीहरु सुजता कार्की, किरण गुरुङ र समय खड्काका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
३) समय खड्का– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि चितवनबाट छानिएका तेस्रो प्रतियोगी हुन् समय खड्का । चितवनमा जन्मिएका समय अहिले काठमाडौँमा बसोबास गर्छन् । गीतका शब्दहरु सिर्जन ागर्न मनपराउने उनी कम्पोजर, लिरिसिष्ट, एरेञ्जर र गायक हुन् । विभिन्न गायक गायिकाको गीतमा कम्पोजरका रुपमा काम गरिसकेका उनले केही गायक गायिकाकालागि गीतका शब्दहरु पनि तयार पारिसकेका छन् । उनका आफ्नै विभिन्न गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेका छन् । अडिसनमा उनले सुरुमा ‘मेरो जीवन’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले दोस्रो पटक ‘लैजा चरी’ बोलको गीत गाएका थिए । यसरी दुई वटा गीत गाएपछि उनी दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका हुन् ।आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा पहिलो नेपाल स्टार को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
प्रविणको बेड्वालको ‘दिलैमा’ मा पल र याङ्शुको यति रोमान्टिक अभिनय
एक करोड क्लबमा प्रविण बेड्वाल र रचना रिमालको ‘उनको प्रीति’